China ukhuselo lokusingqongileyo ukuhonjiswa ngokulula okulula ukufakela iinkuni zeplastiki zeWPC zokubamba ngesandla kunye nabathengisi ULihua
Ukhuselo lokusingqongileyo yangaphandle ukuhonjiswa ngokulula ukufakelwa kweplanga yeWPC
Ubunini beMveliso:WPC zokubambelela
Intlawulo:I-TT / LC
Umbala:Ikofu, itshokholethi, ukhuni, ubomvu iinkuni, umsedare, mnyama, Ngwevu, njl
Ukuhambisa iZibuko:Izibuko laseShanghai
Ixesha lokukhokhela:Iintsuku eziyi-15-25
2.2m, 2.9m, 3.6m okanye wena
Ipaki, igadi, ibhulorho yentaba
I-Smooth, Brushed, Super embossing
Emva kokuthengisa inkonzo
Inkxaso yezobuchwephesha kwi-Intanethi
Ngwevu, ikofu, itshokholethi, i-ceder, njl
●WPC zokubambelela Isetyenziswa ngokubanzi kwibhulorho yepaki kunye nebhulorho yentaba
ukukhusela ukhuseleko lwabantu. Sineendlela ezininzi zeWPC zokubambelelas ukwanelisa iimfuno zabathengi ezahlukeneyo. Kunye nokuthungwa kweenkozo zemithi kunye nokuchukumisa, oku kunokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Zokubambelela WPC babe uyilo entle ezintle kunye nokugcinwa lula izinambuzane ukumelana kunye ngqongqo eliphezulu. Ubume bendalo, buyasebenza ngokutsha kwaye akukho enye imichiza eyingozi, ukugcina izixhobo zehlathi Kulula ukufaka kunye neendleko zabasebenzi eziphantsi.
● Sinemveliso yethu, umbala kunye nobukhulu bunokwenziwa ngokwezifiso zakho. Nceda uzive ukhululekile ukubuza kuthi.
Egqithileyo Yangaphandle Waterproof 130x10mm iinkuni zeplastiki edityanisiweyo WPC eludongeni khazi
Okulandelayo: Ukuxhathisa kwemozulu yangaphandle Wood Composite WPC Decking
Ukufakwa kwesazobe seLishen somthi weplastikhi sokukhuphela
Q1: Usebenza ixesha elingakanani ukusebenza kwakho? Ungayigcina njani imihla ngemihla? Yintoni amandla eseti nganye yokufa?
Q2: Yintoni inkqubo yakho yemveliso?
A: 1. Qiniseka ubungakanani kunye nombala weodolo kunye nomthengi
2.Artisan lungiselela ifomula kwaye wenze isampulu yokuqinisekisa umbala nasemva konyango kunye nomthengi
3.Then yenza i-granulation (Lungisa umbandela), emva koko izakuqala ukwenziwa, iimveliso ze-extrusion ziya kufakwa kwindawo ethile, kamva siya kuyenza emva konyango, emva koko siyakupakisha.
Q3: Lide kangakanani ixesha lokuhambisa eliqhelekileyo kwiimveliso zakho?
A: Iya kwahluka ngokobungakanani.Kubanzi malunga neentsuku ezingama-7-15 zekhonteyina enye eyi-20ft. Ukuba iimveliso ze-3D ezifakwe kwimbumba kunye nezokuhambisa izinto, sifuna iintsuku ezi-2-4 ngokubanzi njengenkqubo enobunzima.
I-Q4: Ngaba unayo ubuncinci be-odolo yobungakanani? Ukuba kunjalo, buthi ubuncinci bobungakanani beodolo?
A: Ngokubanzi sinenani elincinci, yi-200-300 SQM.Kodwa ukuba ufuna ukugcwalisa isikhongozeli kubungakanani bomda, ezinye iimveliso ezimbalwa siza kuzenzela zona!
I-Q5: Uthini umthamo wakho opheleleyo?
A: Ngokubanzi amandla ethu eetoni ezili-1000 ngenyanga.Njengoko siza kongeza eminye imigca yemveliso, oku kuya kunyuka kwixesha elizayo.
Q6: inkampani yakho inkulu kangakanani? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
A: U-Lihua yiShishini eliPhakamileyo kunye neTsha leTekhnoloji, eligubungele isityalo se-15000 seemitha kwiLangxi ye-Indusrial Zone.Sinabasebenzi abangaphezulu kwama-80, bonke abanamava okusebenza kweWPC.
Q7: Zeziphi izixhobo zovavanyo onazo?
Q8: Yintoni na inkqubo yakho esemgangathweni?
Q9: Sithini isivuno sakho semveliso? Yenziwe njani loo nto?
I-Q10: ide kangakanani inkonzo yobomi beemveliso ze-WPC?
I-Q11: Leliphi ixesha lokuhlawula oza kulamkela?
Q12: Ukuthelekisa kunye neenkuni, yintoni inzuzo yeemveliso ze-WPC?
A: 1, Iimveliso ze-WPC zinobuhlobo ngokupheleleyo, zi-100% ezinokuphinda zisebenze.
Okwesibini, iimveliso ze-WPC azinamanzi, ubungqina bokufuma, ukungabinambuzane kunye nokuchasa ukungunda.
Okwesithathu, iimveliso ze-WPC zinamandla aphezulu, ukunxiba okuphantsi kunye nokukrazula, kukungadumba, akukho deformation kwaye akuphukanga
WPC zokubambelela Ngokuba Izinyuko Interior
Wood Embossed Wooden WPC Holl ...
Zangaphandle Woodproof Wood edityanisiweyo WPC Wosenza ...
Yangaphandle Water Park okungangenwa WPC Dec ...
Yangaphandle manzi 130x10mm iinkuni compos zeplastiki ...
Environmental Friendly yangaphandle Wood edityanisiweyo W ...
UV-ukumelana Easy yoFakelo Wood edityanisiweyo ...
WPC decking ngaphandle, WPC decking umgangatho, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking edityanisiweyo,